सडक दुर्घटनाका कारण नेपालमा वर्षेनी हजारौंले ज्यान गुमाइराखेका छन् । सडक दुर्घटनाजनित् मानवीय क्षतिसँगै भौतिक क्षतिको आँकडा पनि उत्तिकै भयावह देखिन्छ । यसरी हेर्दा सडक दुर्घटना र सडक सुरक्षाको विषय नेपालको सन्दर्भमा त पेचिलो छ नै, विश्व सन्दर्भमा पनि यो विषय उत्तिकै पेचिलो रूपमा उठिरहेको छ । यसैकारण विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रत्येक वर्ष सडक सुरक्षा सप्ताह मनाउँदै आइरहेको छ । यो वर्षको सडक सुरक्षा सप्ताह नेपालसहित विश्वभर नै मे ६ देखि १२ सम्म मनाइदैँछ । सडक सुरक्षा सप्ताहको सेरोफेरोमै रहेर सडक सुरक्षा तथा क्षति निवारण विशेषज्ञ समेत रहेका युनिभर्सिटी अफ दी वेष्ट अफ इंग्ल्याण्डका शोधकर्ता डा. पुष्पराज पन्तसँग नेपालीपत्रका लागि सुमनराज श्रेष्ठले गरेको वार्तालापः
– नेपालमा सडक सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ? विश्वका अन्य देशहरूको तुलनामा सडक सुरक्षाको हिसाबले नेपाल कहाँ छ ?
नेपालमा सडक सुरक्षाको स्थिती अवश्य पनि राम्रो छैन । तर, नेपालभन्दा अझै खराब परिस्थिति रहेका देशहरू पनि छन् । तर, त्यसको अर्थ हामीले पछाडि हेर्ने होइन । हामीले अगाडि हेर्नुपर्छ । जस्तैः स्विडेनमा सन् २०२० भित्र सडक दुर्घटना (सडकमा मान्छेलाई सवारी साधनले ठक्कर दिएर मर्नेको संख्या) शुन्यमा झार्ने रणनीति छ । यस हिसाबले हेर्दा हामी पछि नै छौँ । हाम्रो देशमा र विश्वभरि नै गरिबी घट्दै जाँदा जब यातायात र सडक सञ्जाल बढ्दै जान्छ, अनि जनसंख्या पनि बढ्दै जान्छ । यससँगै यातायातको उपभोग गर्ने मानिसहरूको संख्या पनि बढ्दै जाँदा मृत्युको संख्या चैँ बढ्दै जान्छ । तर, गत वर्षको विश्वव्यापी प्रतिवेदनले मृत्युको दर स्थीर भयो, यो बढेको छैन भन्ने एउटा सन्तुष्टीको बाटो दिएको छ ।
– यसरी हेर्दा सडक सुरक्षाको दृष्टिले नेपाल गएगुज्रेकै अवस्थामा छैन भन्ने चैँ देखियो । तर, ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चैँ तपाईंले नेपालको सडक सुरक्षालाई कुन अवस्थामा पाउनुहुन्छ ?
हामी नेपालमा अब तुरुन्तै भएका नीति, नियम र व्यवस्थाहरूलाई लागु गर्ने निकायको चुस्त दुरुस्त पद्दती विकास गरिहाल्नुपर्ने अवस्थामा छौँ । हामीसँग नियमहरू हुँदै नभएका होइनन् । त्यसैगरी हामीसँग ऐन, कानुनहरू पनि छन् । यातायात व्यवस्था विभाग छ । त्यसको आफ्नै एउटा म्याण्डेट छ । तर, यहाँ ‘ग्याप’ के छ भने, आजभन्दा ३० वर्षअगाडि २०४५ सालतिर यातायातसम्बन्धी अवधारणा आयो । त्यतिबेला एकदमै कम यातायातका साधनहरू थिए । सडक पनि थोरै थियो । भन्नुपर्दा व्यवस्थापन गर्न सकिने खालको थियो । अहिले त्यसमा तीनसय गुणा जति वृद्धि भइसक्यो । तर हामी अवधारणाको हिसाबले अझै ३० वर्षअगाडि नै छौँ । हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि, जतिसुकै तर्क वितर्क गरे पनि काम गर्नुपर्ने निकायले यो ‘ग्याप मेन्टेन’ गर्नेगरी एक्सनमा आउनु आवश्यक छ ।
– सडक सुरक्षामा पछिल्लो समय विकसित मुलुकहरूले अपनाएका मापदण्डहरू के–के हुन् ? ती मापदण्डसम्म पुग्न नेपाललाई कति समय लाग्ला ?
ती मापदण्डहरूसम्म पुग्न सजिलै छ । तर, इच्छाशक्ति नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । जस्तैः सबैभन्दा पछिल्लो मापदण्डको रूपमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘सेभ लाईफ एप्रोच’ भनेर सुरू गरेको छ । यसमा यातायातका साधनहरूको गति व्यवस्थापन गर्ने एउटा छ । विभिन्न किसिमका सवारी साधनमा विभिन्न किसिमका गति, साथै विभिन्न किसिमका सडकहरूमा विभिन्न किसिमका गतिको सुनिश्चितता हुनपर्छ भन्ने छ । अर्को भनेको नेतृत्वको कुरा आउँछ । नेतृत्वले यो समस्या हो, यो हाम्रो देश र जनधनको गरिबीको कारण हो भन्ने आत्मसात् गर्नुपर्ने कुरा पनि यसमा छ । तेस्रो सवारीको अवस्थाको कुरा छ । तपाईंहरूले सडकमा देख्नुभएकै छ, २० वर्ष अथवा त्यो भन्दा पुराना सवारीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्दा त्यस्तै हुन्छ । अर्को कुरा कुन गाडीको स्थिति कस्तो छ भन्ने नाप्ने निकाय एउटा मात्रै छ टेकुमा । हामीसँग ३२ लाख जति दर्ता भएका सवारी साधनहरू छन् । मानौं, त्यसमध्ये ८० प्रतिशत मोटरसाइकल छ भने पनि लगभग ६ देखि ७ लाख चारपाङ्ग्रे हुन आउँछ । ति चारपाङ्ग्रेको ‘फिटनेश’ कस्तो छ भने टेकुमा लाइन लगाइदियो भने के स्थिती होला ? त्यस्तै दुर्घटना हुँदै हुँदैन भन्ने स्थिती कहिल्यै पनि हुँदैन । त्यसको लागि ‘प्रि–हस्पिटल केयर’को व्यवस्था गर्ने कुरा पनि यसमा आउँछ । यी कुरा हेर्दा गाह्रा छैनन् । त्यसैले मैले अघि पनि भनें, ‘यो कुरा मुख्य रूपमा इच्छाशक्तिमै आएर ठोक्किन्छ ।’
– जतिसुकै उच्चस्तरको मापदण्ड, प्रविधि र व्यवस्थापन गर्दा पनि दुर्घटना त जहाँ पनि हुने गर्दछ । यस सन्दर्भमा विकसित मुलुकहरूमा हुने सडक दुर्घटना र नेपाल लगायतका अल्पविकसित मुलुकहरूमा हुने सडक दुर्घटनामा के फरक देख्नुहुन्छ ?
विदेशमा हुने दुर्घटनाहरूको एक किसिमले पूर्वअनुमान गर्न सकिन्छ । जस्तैः प्रतिघण्टा पचास माइलभन्दा बढी गति तय गरिएको लेनमा ४० वा ३० माइल प्रतिघण्टाको गतिले सवारी चलाउनुहुन्छ भने तपाईंलाई पछाडिबाट आएको सवारीले पक्कै ठक्कर दिन्छ । तपाईंलाई ठक्कर दिँदा त्यसलाई फेरि अर्कोले ठक्कर दिन्छ । त्यहाँनेर तपाईंको गल्ती के थियो भन्ने स्पष्ट थाहा हुन्छ । हाम्रोमा चाहिँ अलिकति, यहाँ हामी ‘रोड ट्राफिक क्र्यास’हरूलाई पनि ‘रोड एक्सिडेन्ट’ नै भन्छौं । र यो यहाँ दुर्घटनावश नै हुन्छ जस्तो लाग्छ । कतिखेर कहाँ के हुन्छ भन्ने यहाँ पूर्वानुमान गर्नै सकिन्न । के आधारमा पूर्वानुमान गर्ने ? जस्तैः तपाईं लेनको एकदमै पालना गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ । तर, अर्को व्यक्तिको आँखा कमजोर छ कि अथवा त्यसले तपाईंलाई देख्दै देखेन कि भन्ने परीक्षण गर्ने संयन्त्र नै छैन । यसरी तपाईंको गल्ती नै नहुँदा पनि तपाईं सडक दुर्घटनाको शिकार बन्न पुग्नुहुन्छ । किनकी यहाँ लाइसेन्स दिँदाखेरि नै लाइसेन्स लिने व्यक्ति गाडी चलाउन योग्य छ कि छैन भन्ने नै थाहा हुँदैन । उसको रेकर्ड नै भेट्न सकिदैँन । भनेको, विदेशमा चैँ कसैलाई लाइसेन्स दिने कि नदिने ? उसको स्वास्थ्य अवस्था के छ ? भन्ने निर्क्याैल नभएसम्म लाइन्सेन्स नै दिइदैँन । विदेशमा तपाईंले ‘ब्लड टेस्ट’ गर्नुभएको २ वर्ष भयो, अब तपाईंको रगतमा ग्लुकोज बढेको छ कि छैन जाँच्ने बेला भयो भनेर घरमै चिठ्ठी आउँछ । यहाँ त्यस्तो व्यवस्था छैन ।
– तपाईंहरू यसै साता नेपालमा सडक सुरक्षा सप्ताह मनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ । यसपालीको सडक सुरक्षा सप्ताहमा मुख्य रूपमा उठान गर्न लागिएका मुद्दा र विषयहरू के–के हुन् ?
सडक सुरक्षा सप्ताह भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघकै वैश्विक सडक सुरक्षा सप्ताह अन्तर्गत विश्वभरी एकैचोटी एक साता मनाउने कार्यक्रम हो । विगत पाँच वर्षदेखि यो मनाउन लागिएको हो । नेपाल र विश्वकै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघले २०११ देखि २०२० सम्मको अवधिमा सडक दुर्घटनालाई आधा गर्ने भन्ने लक्ष्य राखेको थियो । जुन सफल हुन सकेन । त्यसपछि राष्ट्रसंघले नै नेतृत्वलाई दबाब बढाउने भनेर ‘स्पिक अप’ भनेर सबै तह र तप्काका मानिसहरूलाई आवाज उठाउन प्रेरित गरेको छ । यसअनुसार ‘स्पिक अप फर रोड सेफ्टी’ भन्ने थिममा तपाईं विद्यार्थी समूहको हुनुहुन्छ भन्ने कलेज जाँदा आउँदा भोग्नुपरेको समस्या र त्यसको समाधानको माग राख्ने अहिलेको उद्देश्य हो । सँगसँगै सडक सुरक्षा सुधारका लागि पत्रकारहरू पनि एउटा अभिन्न अंग हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर त्यसको रिर्पोटिङको पाटोमा पनि हामी काम गरिराखेका छौँ । यसपाली हामी यसमाथि पनि छलफल गर्दैछौँ ।
– सडक सुरक्षाको लागि जनचेतना फैलाउने, यसका जोखिमहरूलाई कम गराउन आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउने क्रम निरन्तरजस्तै चलिरहन्छ । यसका बाबजूद सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या वर्षेनी बढ्दो छ । यस्तो हुनुको कारण के हो ? सडक सुरक्षाका मुख्य चुनौतीहरू के के हुन् ?
यसमा तथ्यांक संकलनको कुरा पनि आउँछ । हामी ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांक नै प्रयोग गर्छौं । किनभने सरकारको आधिकारिक तथ्यांक नै त्यही हो । पछिल्लो समय भने अहिले यसमा एकदमै सुधार गरिएको छ । पाँच–छ महिना यता डिजिटल प्रणालीद्वारा मोबाइलको प्रयोग गरेर तथ्यांक संकलन गरिएको कुरा आइरहेको छ । तर, त्यसभन्दा अगाडि कस्तो थियो भने दुर्घटना भयो भने जरिवाना गर्ने, कानुनको हिसाबले दण्ड, सजायँ गर्ने हिसाबले मात्रै ट्राफिक प्रहरी परिचालन भएको थियो । पछि मात्रै सडक सुरक्षा भन्ने अवधारणा थपियो । मैले भन्न खोजेको के हो भने जे तथ्यांक संकलन भएको छ, त्यो सडक सुरक्षाको लागि होइन । यसले के हुन्छ भने जति संख्यामा मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ अथवा घाइते हुन्छन् त्यसको आधा मात्रै रिपोर्टिंग हुन्छ । किनभने तपाईंले मुद्दामामिला गर्नुपर्‍यो भने मात्रै प्रहरीमा रिपोर्ट गर्ने हो । यद्यपि ठूलो घटना भयो भने ट्राफिक आफै जान्छ र रिपोर्टिंग हुन्छ । तर, जहाँ ट्राफिक प्रहरी छैन त्यहाँ पनि त दुर्घटना हुन्छ । जस्तैः विकट ठाउँमा चामल बोकेर गइरहेको एउटा ट्र्याक्टर बाटोमा पल्टियो भने त्यसमा के गर्ने ? त्यहाँ मुद्दामामिला गर्ने पक्षहरू नै छैन भने त्यो घटना तथ्यांकमा आउँदैन । विश्वव्यापी तथ्यांकमा नेपालमा प्रतिदिन सडक दुर्घटनामा १५ जनाको मृत्यु हुने र त्यसको सयौँ गुणा चैँ घाइते हुने देखिन्छ । तर, नेपालको सरकारी तथ्यांकमा यो सातजना देखिन्छ । यस हिसाबले भन्नुपर्दा तपाईंलाई समस्या नै सही ढंगमा थाहा छैन भने त्यसको निराकरण गर्ने योजना कसरी बनाउनु हुन्छ ? यसकारण तथ्यांक संकलन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
– सडक सुरक्षाको लागि नेपालमा सरकारी तदारुकता कस्तो पाउनु भएको छ ? सरकारी निकाय सडक सुरक्षाका सवालहरूमा कत्तिको जवाफदेही छन् ? उनीहरू समस्यामै रुमल्लिरहेका छन् कि समाधानमुखी पनि देखिन्छन् ?
मैले अघि नै भनिसकेँ हाम्रा सरकारी निकायहरूसँग समस्याको पूर्ण जानकारी नै छैन । यद्यपि विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेको अध्ययनमा आधारित अनुमानित तथ्यांकहरू हामीसँग छन् । सँगसँगै सरकारी निकायहरूले राखेको तथ्यांक पनि हामीसँग छ । तर यसमा हामीले राखेका तथ्यांकहरू कति सही छन् भन्ने प्रश्न छ । जुन कुरा मैले माथि पनि गरिसकेको छु । दोस्रो कुरा भनेको समस्या पछि आउने परिणाम हो । समस्या भइसकेपछि त्यसको परिणामहरूको सामना गर्न गर्नुपर्ने तयारी पनि हामीसँग छैन । अर्को कुरा यहाँ जनशक्तिको छ । जनशक्तिको सम्बन्धमा यहाँ ट्राफिक प्रहरी थप्ने कुरा गर्दा आर्थिक भारको दृष्टिले हेरिन्छ । ट्राफिक प्रहरीहरू यहाँ १२–१३ घण्टा काम गर्छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । र, बढी काम गरेबापत उनीहरूलाई ४० प्रतिशत भत्ता थप्ने निर्णय गरिन्छ । तर, मेरो कुरा के हो भने भएका ट्राफिक प्रहरीलाई भत्ता थप्नुभन्दा उनीहरूको ड्युटी अवधि ४० प्रतिशत घटाइदिनु पर्छ । यसले गर्दा ट्राफिक प्रहरीको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ र उनीहरूबाट बढी ‘आउटपुट’ लिन सकिन्छ । भत्तामा खर्चिने पैसा नयाँ जनशक्ति थप्न खर्च गर्न सकिन्छ । नीति निर्माताहरूले यो दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्नुपर्छ ।
– केही समयअघि सम्पन्न सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीमा सरकारले सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने र सोसम्बन्धी आवश्यक कानुन बनाउने जानकारी दिएको थियो । सो सम्बन्धमा तपाईंले दिने सुझावहरू के छन् ?
वहाँहरूको लागि मैले दिने सुझाव भनेको यो बहुपक्षीय कार्यक्रम भएकोले सबैलाई समेट्नुहोस् भन्ने नै हो । मैले अघिदेखि ट्राफिक प्रहरीको कुरा गरिरहेको छु । ट्राफिक प्रहरी भनेको त सडक बनेपछि, त्यो सडकमा सवारी साधन चल्न थालेपछि आएर त्यसको नियमन गर्ने एउटा निकाय हो । यससँगै सडक सुरक्षासँग विद्युत प्राधिकरण, ढल निकास, खानेपानी लगायतका पक्षहरू पनि जोडिएका हुन्छन् । जस्तै भन्नुपर्दा, राम्रो पिच गरेको सडक भोलि हेर्दा खनिएको हुन्छ । यसमा तपाईंहरू समन्वय गर्नुहोस्, सडकलाई रणनीतिक हिसाबले हेर्नुहोस् भन्ने हो । एउटा सडकमा कहिल्यै खन्नु नपर्ने गरी र अर्को सडकमा खन्नुपरे पनि त्यति बाधा नपर्ने गरी योजना बनाउनुहोस् । परिषद् गठनको कुरामा भने राजनीतिक नेतृत्वले काम नगरुन्जेल यो हुँदैन । अहिले राजनीतिक रुपमा एक हिसाबको स्थायित्व छ । तर, यो स्थायित्व भन्दा पनि ठूलो कुरा भनेको इच्छाशक्ति नै हो । ‘सडक सुरक्षा’ भन्ने कुरा खासमा उनीहरूको लागि पनि नौलो कुरा होइन । किनकी सर्वसाधारण मात्रै नभई राजनीतिक दलकै ठूला नेता र प्रशासकहरू समेत सडक दुर्घटनाको शिकार भएका छन् । जननेता मदन भण्डारीलाई नै हेर्नुहोस् । राजनीतिक रूपमा वहाँको हत्या वा दुर्घटना जे भए पनि त्यो घटना सडक सुरक्षासँगै जोडिएको एउटा विषय हो । यसकारण राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति यहाँनेर मुख्य हुन आउँछ ।
सडक सुरक्षा सप्ताह